Kidnapping teny Ambatobe : Afa-doza ilay karàna Ashna Oikabay -
AccueilRaharaham-pirenenaKidnapping teny Ambatobe : Afa-doza ilay karàna Ashna Oikabay
Kidnapping teny Ambatobe : Afa-doza ilay karàna Ashna Oikabay
11/11/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tratra tao anatina fiara Renault Kangoo iray ny basy poletan’ireo jiolahy sy ny basy marika AKM nikasana hanaovana kidnapping teny Ambatobe, omaly tokony ho tamin’ny 02 ora tolakandro. Nahitana bala miisa valo sy saron-tava miisa roa, ary akanjo maromaro ihany koa niaraka tamin’izany. Ramatoakely Ashna Oikabay, zanaky ny tompon’ny mangazay Eurêka no nokasain’ireo jiolahy nalaina an-keriny tamin’izany. Mipetraka any Londres izy io ka mandalo fotsiny izy no eto. Efa raikitra mihitsy ny fifanjevoana ary nalaky nahazo vaovao momba ity kidnapping ity ny zandary ka nanao tari-dositra ireo jiolahy. “Tsy velona io fiara Kangoo io rehefa nikasa ny hitsoaka ireo jiolahy manodidina ny dimy eo. Tsy naharay na inona na inona intsony izy ireo vao naheno ny fiavian’ny zandary, ka tavela, ary tratra tao ireo fitaovam-piadiana nentin’izy ireo “, hoy ny fanamarinam-baovao. Ny voalazan’ireo olona nanatri-maso ny zava-nisy kosa, no nahafahana nanenjika ilay fiara Renault Kangoo iray hafa izay ana orinasa mpanamboatra ranom-boankazo, ary nosakanan’ireo andian-jiolahy sy noteren’ireto farany hitondra azy ireo teny amin’ny lalana mankany Ampasampito. Nizara roa ireo zandary, ka ny sasany nanenjika io fiara izay tratra teny Nanisana io, ny sasany kosa nijanona nanao fanadihadiana, ilay niharan-doza teny Ambatobe.
“Ny saofera efa torovana no hany sisa hita tao anatin’ilay fiara Kangoo. Tafaporitsaka nitsoaka kosa ireo jiolahy”, araka ny fanomezam-baovao ihany. Tamin’ny adina am-bava natao ilay zanaka karana, izay nandositra ary niafina tao an-tranon’olona teny Ambatobe kosa no nahalalana, fa efa narahan’ireo jiolahy, ary nobahanan’izy ireo ny fiara nitondra azy, saingy nodomin’ilay saofera ihany koa ilay fiara Kangoo, ka afaka nitsoaka izy ireo. Voasoroka ary rava noho izany ny fikasan-dratsin’ireo mpaka kidnapping izay niala maina toa ny takotra . Marihina fa zandary nanao fisafoana, teny amin’iny faritra iny no naheno ny fisian’ireo andian-jiolahy nikasa haka an-keriny zanaka karana io, ka nandray ny andraikiny avy hatrany tamin’ny fampandrenesana ireo mpitandro filaminana namany. Amin’ny raharaha fakana an-keriny tahaka izao moa, dia hifandrombonan’ny zandary sy ny polisy ny fanaovana fanadihadiana sy ny fikarohana ireo olon-dratsy. Ankoatra ny fisesisesin’ny karana nalaina an-keriny, dia isan’ny nanamarika ity taona ity ihany koa, teo amin’ny resaka kidnapping ny fiakaran’ny raharaha Annie sy Arnaud teo anatrehan’ny fitsarana, izay nanamelohana olona miisa 16.Tamin’ity taona 2017 ity ihany koa no nahafatesana jiolahy raindahiny tsy latsaky ny telo, sy nandravana tambazotra mpanao ity asa ratsy ity, isan’ny betsaka indrindra.
Andry Rajoelina : Nampanantsoan’ny tribonaly Frantsay
Mitohy hatrany ny fanadihadiana ataon’ny PNF (Parquet National Financier) any Frantsa manodidina ny raharaha famotsiam-bola sy harena tsy fanta-pototra ary fanodinkodinam-bolam-panjakana an’i Mamy Ravatomanga. Nigadona teto Madagasikara folo andro lasa izay ny polisy frantsay… Araka ...Tohiny
Toliara – Taolagnaro : Hanohana an-dRavalomanana
Jean Eric Rakotoarisoa : Hanaiky hala-bato?
Hery Rajaonarimampianina : “Tsy mora ny fanarenana ny firenena”